Aiza Ny Hatezerana Noho ilay Fanolanana Faobe Tao Sodàna Atsimo Rotiky Ny Ady? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2015 6:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Deutsch, Español, Nederlands, English
Tato anatin'ny volana vitsivitsy, tatitra maro no nanamarina ny taha mahavarian'ilay fanolanana faobe tany Sodàna Atsimo, ny fanjakana tanora indrindra atsy Afrika.
Ny Firenena Mikambana ohatra, miampanga ny tafika Sodàne Tatsimo ho mpanolana sy mpampijaly, anisan'izany ny fandoroana zazavavy mbola velona.
Ny tatitry ny Vondrona Afrikana momba ny ady ao Sodàna Atsimo, izay navoaka ny volana lasa teo izao, misy andinindininy mombanà vehivavy antitra sy tanora naolana ary navela nivoa-drà sy tsy nahatsiaro tena. Niantso ny hametrahana fitsaràna ny Vondrona Afrikana, mba hanenjika araka ny lalàna ireo tomponandraikitr'io fanitsakitsahana bevava ny zon'olombelona io.
Ady eo amin'ny tafiky ny governemanta manohana ny Filoha Salva Kiir, avy amin'ny foko Dinka, sy ireo mpikomy manohana ny Filoha Lefitra teo aloha Riek Machar, izay Nuer, ilay ady an-tranon'i Sodàne Tatsimo. Nanomboka ny 15 Desambra 2013 ilay ady, taorian'ny nandroahan'ny Filoha Kiir an'i Machar.
Tsy anavakavahana ireo fanafihana ara-nofo feno herisetra. Ampiasaina ho fitaovana amin'ny ady ao amin'ny firenena ny fanolanana. Nampangaina amin'ny tsy fandraisany fepetra ireo filoha any amin'ny faritra sy ny vondrona iraisam-pirenena satria mbola mitohy mijaly noho izany ihany vehivavy.
Amin'ny Firenena Mikambana, heloka bevava atao amin'ny zanak'olobelona ny fanolanana faobe. Ny taona 2008, nandray ny fanapahankevitra 1820 ny Filankvitry ny Firenena Mikambana momba ny Fiarovana, izay nilaza fa “azo raisina ho heloka an'ady, heloka bevava atao amin'ny zanak'olombelona, na hetsika mandrafitra ny famonoana faobe, ny fanolanana sy ireo endrika hafa amin'ny herisetra ara-nofo “.
Na teo aza ny fanapahankevitry ny Firenena Mikambana, tsy nisy fanjakana notànana ho tomponandraikitra tamin'ny fampiasana ny herisetra ara-nofo ho fitaovam-piadiana amin'ny ady. Ary tsy maningana amin'izany ny fisehoan-javatra any Sodàna Atsimo. Eo anatrehan'ny antso avo mitombo hatrany hidiran'ny mpanampy amin'ny maha olona, mbola mijanona mangina be ihany ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ireo zava-doza ateraky ny herisetra ara-nofo.
Araka ny tatitry ny Amnesty International, lasa tafiditra ho ampahany anatin'ny faritry ny fifandirana maneran-tany ny vatan'ireo vehivavy. Voalaza fa tsy ambim-bokatry ny ady fotsiny ny fanolanana sy fanararaotana ara-nofo, fa ampiasaina tsotra izao ho tetikady ara-tafika iniana atao ihany koa.